7 Yakanakisa Mahara Ekufamba Ekushanya MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Yakanakisa Mahara Ekufamba Ekushanya MuEurope
Kune akawanda mabhuku ekutungamira ane matipi uye mazano kune chero mhando yerwendo rwekuEurope, uye chero rudzi rwemufambi. Aya mabhuku ekutungamira akakosha pakudzidza nezve nhoroondo uye tsika, asi havazokuudza nezve matipi eEurope mukati. Mahara ekufamba marwendo inzira inonakidza yekuwana Europe, uye iwe uchawana yeguta remahara rekufamba rwendo mumaguta ese eEurope.
Pfeka shangu dzakanaka, nekuti tiri kuenda parwendo kuenda ku 7 akanakisa emahara mafambiro ekufamba muEurope.
1. Prague Yakanakisa Yemahara Guta Kufamba Kuratidzwa
Mutungamiri wekutaura Chirungu achasangana newe pa Pineapple hostel mutaundi Rekare re 2.5 maawa kufamba rwendo uchitenderera Prague. Iwe unozotanga rwendo rwekufamba mune inozivikanwa Old Town square, enderera kune iconic Charles Bridge. Kubva kunzvimbo yevashanyi kuenda kunzvimbo dzakanakisa dzeguta masikati uye zvinwiwa, Prague ita uye usaite, iwe uchapedzisa rwendo nematani ekurumbidza uye nyaya dzausingazomboverenge nezvazvo mumabhuku anotungamira.
Prague yemahara yeguta kufamba rwendo nderimwe re 7 akanakisa kufamba nzendo muEurope, nekuda kweye yakakosha gwara. Iwe uchasiya kushanya uchifara kuti uwane Prague, uye nerunyorwa rukuru rwemaresitorendi ayo anopa anodhura emamenyu mamasikati. Pamusoro pe, iwe unozodzidza nezve bar-hopping yeakanakisa Czech dhiira doro, uye akanakisa maonero ePrague anokatyamadza.
2. Amsterdam, Netharenzi
Amsterdam yemahara kufamba kwekushanya, inozivikanwawo seFreeDam guta rekufamba rwendo, izvi zvese ndezvekutsvaga uye kunakidzwa neguta rakasununguka kwazvo muEurope. Rwendo urwu runobuda zuva nezuva kubva panzvimbo yemusangano kuEngland Stock kwemaawa matatu ekufamba, kubva kungano dzekare dzeAmsterdam kusvika kune yazvino uye yemaitiro eAmsterdam nyaya.
Panguva yeiyi 3 nguva dzinonakidza, iwe uchasangana nevafambi vanobva kutenderera pasirese uye nekudzidza nezve Amsterdam's liberal drug policy, matsvuku magetsi dunhu, zvematongerwo enyika, uye nhoroondo kubva kumatungamiriri’ nyaya dzinonakidza. Pamusoro pe, parwendo rwekufamba rwemahara, iwe unogona kuwana zvemukati matipi kubva kumutungamiriri pa akanakisa ezuva-nzendo kubva kuAmsterdam uye neEuropean.
3. Berlin Yakanakisa Yemahara Guta Kufamba Rwendo
Berlin yepakutanga kufamba kwemahara kweguta ndiyo nzira yakanakisa yekutsvaga nhoroondo yeguta, zviratidzo, uye zvakakosha mumaawa mashoma. Iyo huru yekutangisa yekufamba rwendo kune rimwe remaguta ane hippest kuGerman, ine nhoroondo yakapfuma, and politics.
Pamusoro pezvakakurumbira zvezvakaitika kare, Berlin inopa marwendo akasiyana acharatidza Berlin kubva kwakasiyana mativi; artistic, foodie, kana zvinwiwa zvine chekuita nazvo. mune Yekutanga Berlin yemahara yeguta kufamba rwendo, uchashanya 6 yemakona makuru eBerlin, uye inzwa nezve nyaya dziri seri kwemadziro eBerlin netsika.
Guta rekutanga reBerlin remahara rekufamba rinosiya kaviri pazuva, kubva panzvimbo yemusangano pa “Kuda”. Iye mutungamiri achange akamirira mune Yekutanga yemahara yekufamba yekushanya t-shati yeBerlin uye angafara kukurudzira nzvimbo dzakanakisisa dzemabiko muguta., uye sei kufamba kubva kuBerlin kuenda kune mamwe maguta makuru kuGerman nenzvimbo dzinochengeterwa nyika.
4. Venice, Itari
Venice nderimwe remaguta madiki muItari. Kunyange zvakadaro, zviri nyore kwazvo kuenda kurasika kana iwe uri kutenderera munzira dzayo nhete uye mukare akitekicha. Venice yemahara yeguta yekufamba rwendo ichakutungamira iwe kuburikidza nenhoroondo, tsika nemagariro, unyanzvi, uye kuvaka pa 2.5 kushanya kwemaawa. Anodaidzira gwara Simona anokuudza zvese nezve iro guta, chili, uye nzvimbo dzerudo.
Zvinonyanya kuratidzwa kwekushanya kwemahara kweVenice ndeye Simona, muperekedzi, nemhepo inonakidza. Zvisinei nemvura, huwandu hwevanhu, iwe uchave uine yakanakisa nguva uye uwane akawanda marongero e Chikafu cheItaly uye Eprol zvinwiwa muVenice.
5. Paris Yakanakisa Yemahara Guta Rwendo Rwokufamba
Paris nderimwe remaguta anoshanya kwazvo muEurope, tisingataure munyika. Kana iyo Eiffel Tower uye iyo Avenue des Champs-Elysees yakazara nevanhu vashanyi, zvakaoma kuti unakirwe nemashiripiti enzvimbo dzeguta dzinoonekwa. asi, parwendo rwemahara rwekufamba, mutungamiri wako achaita kuti iwe uwane zvakanaka zvezviratidzo izvi, uye zvimwe zvakawanda mukushanya kwakasarudzika.
Paris musha kune akawanda anokosha akavanzwa, nokudaro huwandu hwenzendo dzekufamba mahara hauperi. Kune masikati neusiku nzendo, kushanya kwenzvimbo dzese, zvekugadzirira uye zvekushanya maratidziro. zvisinei, iro rakanakisa remahara guta rekufamba rwendo muParis ndizvo matombo akavanzika uye zvakavanzika kuParis kushanya. Iyo inotungamira inokutora iwe kuburikidza nendimi dzakavanzika dzeLouvre, zvivakwa kunzvimbo dzakavanzika dzemifananidzo, kure nemapoka uye mumoyo weParis.
6. Zurich Chokoreti Yemahara Kufamba Guta Kuratidzwa
Pamusoro peye huru uye inonakidza gwara, Zurich rakanakisa guta rekufamba nzendo nderekugadzirira kudenga. Sei uchifamba kuburikidza neguta rekare uye Zurich inosimbisa mune yechinyakare maitiro, paunenge uchikwanisa kuinamisa nechokoreti yeSwiss yeSwitzerland. Edzai truffles, dzidza nezve cocoa kuburitsa, uye shanyira iyo akanakisa chocolatiers muEurope sekuyemura kwaunoita kereke yeLindenhof neyeGrossmunster.
Zurich yemahara kufamba kwekushanya iri 2 maawa akareba uye anoenda Mugovera wega wega kubva kuParadeplatz, uye hapana chikonzero chekunyoresa.
Lugano kuenda kuZurich Chitima Mitengo
7. Vienna, Ositiriya
Nzira yakanakisa yekutanga nayo kuongorora Vienna iri paKugamuchirwa kuVienna yemahara yeguta kufamba rwendo. Munenge 2 maawa iwe unowana ipfupi nhoroondo yeVienna uye ayo makuru masikirwo, kwaunogona kuravira chikafu cheViennese kwemasikati kubva kuMarina, mumwe weakanakisa magwara muVienna.
Kaviri pazuva, mutungamiri achange akamirira iwe kuAlbertina square kune imwe nhoroondo yekushanya yakatenderedza Vienna.
Chinhu chakanakisa nezverwendo rwekufamba rwemahara igwara. Nepo mafambiro mazhinji ari muChirungu, mutungamiri anounza zvese zvaunoda kuti uzive nezve guta iri rakanakisa Chirungu. Wese mubvunzo uchapindurwa uye iwe unozopedza kushanya neinoshamisa kurudziro, anecdotes, uye ruzivo nezveguta. Chinhu chechipiri chakanakisa ndechekuti iyo 7 guta rakanakisa kufamba nzendo muEurope, ndezvekuti vakasununguka, ipfupi uye inonongedza, uye kuita.
Mahara Kufamba Guta Kuratidzira MuEurope Mibvunzo
Ndiwo Mahara Ekufamba Ekushanya Akasununguka Chaizvo?
Mahara guta kufamba mafambiro ari tip-based. Zvinoreva, haufanire kunyorera nzvimbo parwendo rwekubhadhara, asi pakupera kwekushanya, iwe unofanirwa kutenda mukuru mutungamiri nekupa.
Zvakawanda Sei Zvandinoda Kuti Tip?
Kubhadhara kunosiyana kubva kuguta neguta, asi paavhareji tip iri € 5 kusvika € 15.
Ini ndinowana Sei iwo Anotungamira?
Mahara guta rekufamba mafambiro ekufambisa achasangana newe kunzvimbo yepakati yemusangano, uye iwe uchavaziva nehembe yavo. Pamusoro pe, vangangouya vachikwazisa.
Kune Ariko Ekufamba Kwekushanya Mune Dzimwe Mitauro Kunze KweChirungu?
Yakawanda yemahara yekufamba nzendo muEurope inopa kushanya muChirungu uye mutauro wemuno, uine kushanya kushoma mune mimwe mitauro. Izvi zvinosiyana kubva kuguta neguta, nevashanyi vanoshanya.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rwako kune akanakisa maguta eEurope uye kufamba nzendo nechitima.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "7 Yakanakisa Yemahara Ekufamba Ekushanya MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Zh-CN to / ja kana / of uye mimwe mitauro.